Madaxweyne Yuusuf oo saakay soo gaaray London ayna dad badan diyaarinayaan mudaaharaad looga soo horjeedo, iyo Qaraxyo iyo toogasho isdaba joog ah oo ka dhacday magaalada Muqdisho maanta. Ruunkinet 18/02/07
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta yimid magaalada London ee dalka UK. Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf ayaa saakay 3:15 subaxnimo soo gaaray magaalada London.
Madaxweynaha oo u yimid magaalada London arrimo la xiriira caafimaadkiisa ayaan jirin cid soo dhaweysay oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliya ee ku nool dalka Ingriiiska.
Mar aan weydiinay arrintaasi dad ku dhow dhow oo ay madaxweynaha qaraabo yihiin ayaa noo sheegay in madaxweynaha ay soo dhaweysay dowladda Ingriiska ayadoo ay qaar kalane ay sheegayaan in ay soo dhaweysay safaaradda dowladda Itoobiya ay ku leedahay magaalada London.
Immaatinka madaxweynaha ee magaalada London ayaa haatan ka duwan socdaalladii hore ee uu ku yimid dalkan ayadoo ay haatan muuqata in ammaankiisa ay si weyn u ilaalinayaan dad ay qaraabo yihiin.
Sidoo kale, dad badan oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Ingriiska ayaa diyaar garow ugu jira in ay ku mudaaharaadaan madaxweynaha Soomaaliya.
Dadkan oo u arka madaxweynaha in uu gacanta u geliyay Soomaaliya dal shisheeye ayaa si weyn uga soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha ee arrimaha Soomaaliya in kastoo la qarinayo meesha uu ku soo degay madaxweyne Yuusuf.
Dhanka kale, toogasho iyo qaraxyo lixaad leh ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Qaraxyadan ayaa mid ka mid ah wuxuu ka dhacay agagaarka rugta caafimaadka ee Dr. Cismaan Dufle ee ku taal xaafadda Siinay ee magaalada Muqdisho.
Qaraxan oo ku dhacay gaari ah Marco 2 ayaa la sheegay in ay ku dhinteen 5 ruux. Sidoo kale, wararka ka immaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan ciidamada Booliiska lagu dilay laguna dhaawacay askari Itoobiyaan ah oo la socday ninkaasi ayagoo saaran gaari taxi ah.
Cabdullah Xuseen, Ruunkinet, London